Taliyeyaal ciidan oo xilka looga qaadayo qaraxii Gobolka Banaadir |
Warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya ay qorsheynayaan iney la bedelo dhamaaan Taliyeyaasna Ciidamada Xarunta Gobolka Banaadir oo dhawaan uu ka dhacay Qarax lagu dilay Mas’uuliyiin uu ku jiro Guddoomiyihii Gobolka Banaadir C/raxmaan Cumar Cusmaan (Injieer Yariisow).
Xogta aan helnay ayaa sheegeyso in Taliyeyaasha Ciidamada Booliska iyo Nabad sugida Xarunta Gobolka Banaadir la bedelayo si loo xaqiijiyo amniga xarunta mar kalena qarax iyo falal amnidaro kale uga dhicin.
Amarka lagu bedelayo Saraakiisha ilaalada Xarunta Dowladda Hoose ee Xamar ayaa wuxuu ka soo baxay Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre si isbedel amni xooggan looga dareemayo xarunta iyo guud ahaan magaalada Muqdisho.
Ra’iisal wasaare Kheyre oo gelinkii dambe ee shalay booqday xarunta Gobolka Banaadir gaar ahaan howlkii uu ka dhacay Qaraxa ayaa ka hadlay muhiimada ay leedahay in xil gooni ah la iska saaro xaqiijinta amniga xarunta Gobolka,islamarkaana loo baahan yahay in la helo mas’uuliyiin lagala xisaabtamo falalka dhacaya.
Qaar ka mid ah Ciidamada ilaalada ku qornaa xarunta Gobolka Banaadir xilligii uu qaraxa dhacayay ayaa la sheegayaa iney xiran yihiin,kuwaasi oo loo heysto sababta qof aan la baarin gudaha xarunta u galay iyo sababta ay ku dhacday.
24-ka bishii Julay ee sanadkan ayaa Qarax lagu dilay guddoomiyihii Gobolka Banaadir wuxuu ka dhacay xarunta Dowladda Hoose Xamar,kaasi oo ay fulisay Haweeney araga la’ oo ka tirsaneyd shaqaalaha Gobolka Banaadir.